Foto-drafitrasa roa no notokanana teny amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy ny 9 novambra 2018. Anisany fanakianana azon’ny fitsarana matetika ny tsy fahampian’ny foto-drafitrasa. Ankehitriny, manana fitsarana ho an’ny zaza tsy ampy taona sy ivon-toerana fitahirizana ny rejistra mirakitra ny raharaha ara-barotra ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy. Nanatrika ny lanonam-pitokanana an’ireto foto-drafitrasa vaovao ireto ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao, ny ministry ny fitsarana Harimisa Hary Vololona.
Dosie momba ny zaza tsy ampy taona ho kirakiraina ao amin’ity tribonaly misahana ny ankizy ity. “Hanatsarana ny fikirakirana ny dosie momba ny raharaham-barotra ity trano fitahirizana arisiva ity ary famerenana ny fanjakana tan-dàlana”, hoy filoham-panjakana, Rivo Rakotovao. Maniry ny tenany fa hiantraika mivantana amin’ny fe-potoana hikirakiràna ny raharaham-barotra eny anivon’ny fitsarana ny foto-drafitrasa vaovao. Dingana iray hirosoana amin’ny famadihana ny asam-panjakana rehetra ho nomerika ihany koa. Anisany mamerina ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana sy misoroka ny fitsaram-bahoaka ihany koa ny finiavana manamboatra foto-drafitrasa tahaka izao.
‹ “ENQUÊTEURS” MANONTANY NY SAFIDINY NY MPIFIDY: Tsy nahazo alalana avy any amin’ny CENI	› FIDIRAN’NY VOKATRA AVY IVELANY: Poizina ho an’ny orinasa malagasy